အကောင့်ထဲ မှားဝင်လာတဲ့ သိန်း တစ်ရာကျော်ကို ရိုးသားစွာ ပြန်ပေးခဲ့သူ •
18/11/2019 Yan Naing Life Style 0
KBZ ဘဏ်အကောင့်ထဲမှားဝင်တဲ့ ပိုက်ဆံ ၁၃၆ သိန်း ၃ သောင်းကို ပြန်ထုတ်ပြီး ပိုင်ရှင်ထံပေးအပ်ခဲ့သူ
ရွှေ ငွေနဲ့ ဂုဏ်ဒြပ်တို့ မရှိလည်း နေနိုင်ပါတယ် တစ်သက်လုံး အလိုအပ်ဆုံးက ဘဝမှာ အရိုးသားဆုံးနေဖို့
ကျနော့် KBZ Bank Account ထဲမှားဝင်တဲ့ ပိုက်ဆံ ၁၃၆ သိန်း ၃သောင်း ကို ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ ဟုမ္မလင်းက အမကြီးကို ပြန်လည်ထုတ်ယူပြီး ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်
တော်သေးတယ်ရှင့် မောင်လေးလိုလူမျိုးနဲ့တွေ့လို့ ပြန်ရတာတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဘယ်လိုမှ မအောင်းမေ့ပါနဲ့ ဆိုပြီး ပိုက်ဆံ ၁၀ သိန်း ထုတ်ပေးပေမယ့် တစ်ပြားမှ မယူပါရစေနဲ့ ရိုးသားတဲ့ဂုဏ် တစ်သက်စား မကုန်ပါဘူး အစ်မရယ် ဆိုတော့
အားနာပါတယ် ကျမ အဲ့သဘောမဟုတ်ပါဘူးတဲ့….
ကျနော့်ကိုပေးမယ့် ပိုက်ဆံ လိုအပ်တဲ့နေရာမှာ လှူပေးပါလို့ ပြုံးပြုံးလေးနဲ့ ပြောပြီး ပြန်ခဲ့လိုက်ပါတယ်
အကောငျ့ထဲ မှားဝငျလာတဲ့ သိနျး တဈရာကြျောကို ရိုးသားစှာ ပွနျပေးခဲ့သူ
KBZ ဘဏျအကောငျ့ထဲမှားဝငျတဲ့ ပိုကျဆံ ၁၃၆ သိနျး ၃ သောငျးကို ပွနျထုတျပွီး ပိုငျရှငျထံပေးအပျခဲ့သူ
ရှေ ငှနေဲ့ ဂုဏျဒွပျတို့ မရှိလညျး နနေိုငျပါတယျ တဈသကျလုံး အလိုအပျဆုံးက ဘဝမှာ အရိုးသားဆုံးနဖေို့
ကနြေျာ့ KBZ Bank Account ထဲမှားဝငျတဲ့ ပိုကျဆံ ၁၃၆ သိနျး ၃သောငျး ကို ပိုငျရှငျဖွဈတဲ့ ဟုမ်မလငျးက အမကွီးကို ပွနျလညျထုတျယူပွီး ပေးအပျခဲ့ပါတယျ
တျောသေးတယျရှငျ့ မောငျလေးလိုလူမြိုးနဲ့တှလေို့ ပွနျရတာတဲ့ကြေးဇူးတငျပါတယျ ဘယျလိုမှ မအောငျးမပေ့ါနဲ့ ဆိုပွီး ပိုကျဆံ ၁၀ သိနျး ထုတျပေးပမေယျ့ တဈပွားမှ မယူပါရစနေဲ့ ရိုးသားတဲ့ဂုဏျ တဈသကျစား မကုနျပါဘူး အဈမရယျ ဆိုတော့
အားနာပါတယျ ကမြ အဲ့သဘောမဟုတျပါဘူးတဲ့….
ကနြေျာ့ကိုပေးမယျ့ ပိုကျဆံ လိုအပျတဲ့နရောမှာ လှူပေးပါလို့ ပွုံးပွုံးလေးနဲ့ ပွောပွီး ပွနျခဲ့လိုကျပါတယျ
This Year : 90011
Total Hits : 1248238